ANDROID ပေါ်မှာလမ်းသွားလမ်းလာများအတွက် NAVIGATION - အန်းဒရွိုက် - 2019
Operating System ကို Windows ရဲ့မိသားစုကိုအသုံးပြုသူများသည်ထိုပြဿနာကိုသို့ပြေးနိုင်သည် dbghelp.dll ဖိုင်ပေါ်လာသောအရာတစ်ခုအမှား, ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်အချို့ applications များဖွင့်။ ဤသည်ပြောင်းလဲနေသောစာကြည့်တိုက်စနစ်ဖြစ်ပါသည်, ထို့ကြောင့်အမှားတစ်ဦးထက်ပိုလေးနက်ပြဿနာတစ်ခုလက္ခဏာရှိနိုင်ပါသည်။ ဤပြဿနာကို "ခုနစ်" နဲ့စတင် windose အပေါငျးတို့သဗားရှင်းအပေါ်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
dbghelp.dll နှင့်အတူ troubleshooting
စနစ်က DLL နှင့်ဆက်စပ်အားလုံးကျရှုံးကြောင့်ဗိုင်းရပ်စ်ခြိမ်းခြောက်မှုမှဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါ, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အောက်ကအဆိုပြုထားညွှန်ကြားချက်များ၏အကောင်အထည်ဖော်မှုအပေါ်စတင်မှီ, ရောဂါကူးစက်ဘို့အသင့်ရဲ့စက်ကိုစစျဆေးဖို့အထူးအကြံပြုလိုတယ်။
Method ကို 1: အဆိုပါအပြည့်အဝပြန်လည် install ပြုလုပ်အစီအစဉ်ကို
program ကို run ဖို့လိုအပျတဲ့ DLL ကိုအသိအမှတျမထားဘူးအဘယ်ကြောင့်တခါတရံမှာဆော့ဖ်ဝဲ installer ကို၏ installation စဉ်အတွင်းမှားယွင်းစွာ, registry ကိုပြုပြင်မှု။ ဤအကြောင်းကြောင့်, registry ကိုရှင်းလင်းဖို့အစီအစဉ်ကို dbghelp.dll နှင့်အတူပြဿနာများဖြေရှင်းရေးအတွက်အကူအညီပေးပါလိမ့်မယ် reinstall ။
အဆိုပါမအောင်မြင် application ကို uninstall ။ ၎င်း၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုအနည်းငယ်ကလစ်အားလုံးပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့လျှောက်လွှာအချက်အလက်များ၏ဖယ်ရှားပစ်ရခွင့်ပြုချိန် မှစ. ဤသို့ပြု, ငါတို့က, Revo Uninstaller ပရိုဂရမ်ကိုသုံးပြီးအကြံပြုပါသည်။
သင်ခန်းစာကို: Revo Uninstaller သုံးစွဲဖို့ဘယ်လို
တချို့အကြောင်းပြချက်ကြောင့်ဒီဖြေရှင်းချက်၏အားသာချက်ယူမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုလျှင်, အစီအစဉ်များကို uninstall လုပ်ဘို့တစ်လောကလုံးညွှန်ကြားချက်ကိုဖတ်ရှုပါ။
Read more: မှာ Windows ပေါ်တွင် applications များကိုဖျက်ဖို့ကိုဘယ်လို
, ဥပမာ, အ Third-party software များနှင့်အတူပိုကောင်းလည်း, CCleaner ကိုသန့်စင်မှတ်ပုံတင်ရန်သယ်။
သင်ခန်းစာကို: CCleaner ကိုအတူ registry ကိုရှင်းလင်း
load ဖြန့်ဖြူးဝေးလံသော application ကိုအလုပ်လုပ်လူသိများနှင့်တင်းကြပ်စွာ Installer ၏ညွှန်ကြားချက်များကိုအောက်ပါကြောင့် reinstall ။ သင့်ရဲ့ PC မှာသို့မဟုတ် Laptop ကို reboot ဖို့မေ့လျော့တော်မမူပါနှင့်။
အများဆုံးကိစ္စများတွင်ဤလုပ်ရပ်များပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့လုံလောက်သောဖြစ်လိမ့်မည်။ သူကအဲဒီမှာနေတုန်းပဲဖွင့်ဆိုပါက - အပေါ်ကိုဖတ်ပါ။
Method ကို 2: Copy ကူးလျှောက်လွှာ directory ကိုအတူ dbghelp.dll
ပြဿနာတစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာဖြေရှင်းချက်ထည့်သွင်းလျှောက်လွှာနှင့်အတူ directory ထဲတွင်လိုအပ်သောစာကြည့်တိုက်ကိုကော်ပီကူးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်မှာ installer ကိုများသောအားဖြင့်ဒီဖိုင်ကိုလွတ်လပ်စွာဒီစစ်ဆင်ရေးကိုလုပ်ဆောင်သွားရန်လိုအပ်ကြောင်းအစီအစဉ်များဖြစ်ကြောင်း, သို့သော်တစ်ဦးပျက်ကွက်ဖြစ်ပျက်မနိုင်သောတပ်ဆင်ခကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်လျက်, ပြဿနာရဲ့အဘယ်အရာကိုအကြောင်းမရှိတည်ရှိသည်လျှင်။ အောက်ပါသလား:
အဆိုပါဖွင့်ပါ "Explorer ကို" နှင့်လာရောက်လည်ပတ်ကို C: Windows System32ထိုအခါကယခု directory dbghelp.dll အတွက်ဖိုင်တည်နေရာနှင့်က copy ဥပမာ - အဘို့, keyboard shortcuts တွေကိုသုံးပြီး ပြီးရင် Ctrl + C ကို.
အာရုံစိုက်! directory ကိုဖိုင်များကိုစီမံခန့်ခွဲသူအခွင့်အရေးများရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်စနစ်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်!
ကိုလည်းကြည့်ပါ: အကောင့်တစ်ခုကိုသုံးပြီး Windows တွင် "အုပ်ချုပ်ရေးမှူး"
သွားပါ "Desktop ကို" ထိုသို့ဆန္ဒရှိအစီအစဉ်ကိုအပေါ်တစ်ဦးတံဆိပ်ကိုရှာပါ။ အဆိုပါဖြတ်လမ်း menu ကိုရွေးပြီးပါက Select လုပ်ပါနှင့်လက်ျာ mouse ကိုခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ဖိုင်တည်နေရာ".
ထို program ၏ installation directory ကို - ကယခင်ကတစ်ဦးပေါင်းစပ်အသုံးပြုပြီးကူးယူထည့်သွင်း dbghelp.dll ပြီးရင် Ctrl + V ကို.
အားလုံးပွင့်လင်းပြတင်းပေါက်ပိတ်ဖို့ "Explorer ကို" နှင့်စက် reboot ။
ဤနည်းလမ်းကိုထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ကိုသာထည့်သွင်းစဉ်းစား DLL-ဖိုင်ရဲ့ကျန်းမာရေးပါ။
Method ကို 3: စနစ်ကဖိုင်တွေ၏သမာဓိ Check
အဲဒီ DLL OS ကိုစာကြည့်တိုက်ဘို့လိုအပ်ပါသည်ကတည်းကအားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အောင်မြင်မှုများကြောင့်ပျက်စီးနေသည်အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ပြဿနာမျိုးသည်ဤဖိုင်တွေရဲ့အော်ပရေတာစစ်ဆေးနေခြင်းဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်ပါသည်။
ဒါကြောင့်အမြဲတမ်း windose နှောင့်အယှက်ဖြစ်နိုင်သည်အဖြစ်ကို manually သို့မဟုတ် Third-party software ကို အသုံးပြု. dbghelp.dll ကိုအစားထိုးရန်ကြိုးစားကြဘူး - ကျနော်တို့ချက်ချင်းသတိပေးချင်တယ်!
ပိုမိုသိရှိလိုပါက: မှာ Windows 7, Windows 8 စနစ်ကဖိုင်တွေ၏သမာဓိစစ်ဆေး, နဲ့ Windows 10
ဒါကဖိုင်ကို dbghelp.dll troubleshoot ငါတို့၏ကိုယ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနည်းလမ်းများအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။